Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisii kowaad oo dibada ah ku aaday Sucuudi Caraabiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo safarkiisii kowaad oo dibada ah ku aaday Sucuudi Caraabiya
February 23, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisii kowaad oo dibada ah ku aaday Sucuudi Caraabiya. [Xigashada Sawirka: Cali Ducaale/sawirqaade madax-banaan]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saakay oo Khamiis ah u safray dalka Sucuudi Caraabiya, sida ay sheegeen ilo-wareedyo madaxtooyada ah.
Inta uu ku guda jiro safarkiisa gudaha Sucuudiga, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa in uu kulamo la yeelan doono masuuliyiinta sare ee Sucuudiga.
Safarkan ayaa noqonaya kii kowaad oo dalka uu dibada uga baxo tan iyo markii baarlamaanka Soomaaliya ay u doorteen Farmaajo madaxweynaha dalka bilowgii bishaan.
Kahor inta uusan u ambabixin Sucuudi Caraabiya, Farmaajo ayaa Xasan Cali Khayre u magaacabay Raysulwasaarihiisa.
December 14, 2016 RW Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo u safray Isutaga Imaaraatka Carabta